Arsenal oo sheegtay Kooxda ay ka iibineyso Aubameyang & Qorshahooda xiga haddii ay kula heshiin waayaan iibkiisa – Gool FM
Haaruun June 3, 2020
(London) 03 Juun 2020. Wargeyska Ingiriiska ka soo baxda ee The Sun ayaa ku warramaya in kooxda Arsenal ay sii heysan doonto weeraryahanka aanan saldhigan ee Pierre-Emerick Aubameyang, kaasoo la la xiriirinayo u dhaqaaqista kooxo dhowr ah.
Aubameyang oo bishan gudaheeda buuxsan doona da’da 31 sano ayaa qandaraaskiisa garoonka Emirates ay kaga harsan tahay hal sano, xilli uu toddobaadkii ka qaato mushahar dhan 200,000 oo gini, waxaana suuro gali waayay inay Gunners kabtankeeda ku qanciso heshiis cusub oo uu kula sii joogo.
Si kastaba ahaatee, Kooxda Arsenal ayaa go’aansatay inay Aubameyang sii heysato sanad kale haddii ay weyso koox u soo bandhigta qiimaha ay ku doonayaan iibkiisa.
Barcelona ayaa xiiso badan u muujineysay weeraryahanka heerkan caalami ee qaranka Gabon bishii Janaayo ee sanadkan horraantiisa, waxaana kooxda Ingiriiska ka dhisan ay diidday dalab ku kacayay 50 milyan oo gini.
Paris Saint-Germain, Chelsea iyo Inter Milan ayaa sidoo kale doonaya adeegga gooldhalineed xiddigii hore ee Borussia Dortmund, balse Arsenal ayaa dooratay kooxda ay ka iibineyso laacibkeeda.
Kooxda guuldarro la’aanta ku qaadday Premier League xilli ciyaareedkii 2003-04 ayaa Aubameyang ka iibineysa kooxdii miiska u saarta dalab ka qiimo sarreeya 20 milyan oo gini suuqa xagaaga, haddii ay heli wayso dalabka ay dooneysana waxay go’aansatay inay sii ceshato sanad ciyaareed kale.
Aubameyang ayaa bishii Janaayo ee 2018 Arsenal kaga soo biirray kooxda Jarmalka ka dhisan ee Dortmund, waxaana tan iyo markaas uu u dhaliyay 61 gool kaddib 97 kulan oo uu u saftay tartammada oo dhan.